15 Dugsiyada Sare ee ugu Fiican Scarborough Canada
Ku dhowaad arday kasta oo ka tirsan gobolka Scarborough wuxuu rabaa inuu helo waxbarashada dugsiga sare ee ugu wanaagsan ee la heli karo. Sababtaas awgeed, waxaan diyaarinnay liistada iskuulada sare ee ugu wanaagsan Scarborough Canada kuwaas oo u diyaariya ardayda inay waxbartaan oo ay ku qalin jabiyaan darajooyin sare ee kulliyad kasta oo adduunka ah.
Wax ka barashada mid ka mid ah iskuulada sare ee ugu wanaagsan Scarborough Canada waxay ku siineysaa inaad ka sareyso ardayda kale marka aad gasho kuleejka ama jaamacadda. Dugsiyadan sare waxay bixiyaan koorsooyin la xiriira barnaamijyada ardayda laga siiyo kuleejka.
Dugsiyada Sare ee ugu Fiican Scarborough Canada
Dr. Norman Bethune Machadka Collegiate
SATEC ee WA Porter Collegiate
Akadamiyadda RH King
Dugsiga Beddelka Secondary Delphi
West Hill Collegiate Machadka
Machadka Collegiate Birchmount Park
Dugsiga Sare ee Neil McNeil
Dugsiga Sare ee Maplewood
Dugsiga Sare ee Wales College
Maxay yihiin dugsiyada sare ee ugu wanaagsan Scarborough Canada?
Dr. Norman Bethune Machadka Collegiate (Bethune, BCI, ama Dr. Norman Bethune CI) waa mid ka mid ah iskuulada sare ee dowliga ah ee ugu wanaagsan Scarborough Canada, oo la aasaasay 1979. Dugsigan sare wuxuu leeyahay in ka badan 1000 arday karti.
Bethune waxay socotaa Fasalada 9aad ilaa 12aad. Luqada wax lagu barto ee BCI waa luqadda Ingiriisiga. Bethune waxay ardayda siisaa fasalo Luuqadeed Casri ah waxayna taasi fursad u siineysaa inay u amba baxaan banaanka filimada Faransiiska iyo Isbaanishka, soosaarka tiyaatarka, iyo maqaayadaha. Mararka qaar, ardaydu waxay u safraan Faransiiska iyo Isbaanish safarro dalxiis.
Ardayda waxaa la siiyaa Ingiriisiga oo ah Luuqad Labaad (ESL) Bethune. Dhanka kale, ardaydu waxay galaan safaro shaqo iyaga oo adeegsanaya barnaamijka ESL-ka si kor loogu qaado dhaqanka dalka.
Intaas waxaa sii dheer, iskuulku wuxuu kaloo bixiyaa barnaamijka Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP). Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu daboolo baahiyaha dhammaan ardayda iyo ardayda naafada ah oo ay ka mid yihiin dabeecadda, wada xiriirka, caqliga, jirka, iyo naafonimada waxbarasho ee badan.
Ardayda wax ka barta BCI waa u xor inay ku biiraan naadiga farshaxanka, naadiga riwaayadaha, ama golaha muusikada.
Machadka Agincourt Collegiate (ACI or Agincourt) waa mid ka mid ah dugsiyada sare ee ugu wanaagsan Scarborough oo la aasaasay 1915.
Maaddaama mid ka mid ah dugsiyada sare ee ugu wanaagsan Scarborough Canada, ACI waxay bixisaa barnaamij meelayn heer sare ah oo fiisigis ah, kiimiko, bayoolajiga, tirakoobka, xisaabta iyo dulinka, iyo Faransiiska.
Intaa waxaa sii dheer, ardayda ka socota Fasalada 9aad ilaa 12aad waxaa la siiyaa barnaamijyo Faransiis ah oo lagu barto Faransiiska iyo Faransiiska. Barnaamijyada Faransiisku waxay ardayda u oggolaadaan inay bartaan maadooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin français, riwaayadaha farshaxanka, muuqaalka farshaxanka, jimicsiga waxbarashada, xisaabta, géographie, Histoire, iyo Informatique.
Mar alla markii ay ardeydu isu ururiyaan tirada dhibcaha looga baahan yahay barnaamijkan, waxaa la siiyaa Shahaadada Af-Ingiriisiga ee Dheeriga ah ama Dheeraad ah iyadoo la siinayo sharaf.
Agincourt sidoo kale waxay bixisaa barnaamij muusig oo abaalmarin ku guuleystay.
Akadeemiyada Scarborough ee Teknolojiyada, Deegaanka iyo Barashada Kombuyuutarka ee WA Porter Collegiate (SATEC, SATEC @ WA Xamaaliga CI, WAPCI, ama WA xammaal) waa dugsi sare oo ku yaal Scarborough, Toronto oo la aasaasay 1958.
Iskuulku wuxuu soconayaa Fasalada 9 ilaa 12. WAPCI waxaa si fiican loogu yaqaan machad magnet sababtoo ah barnaamijkiisa tikniyoolajiyad adag iyo siyaasadiisa. Ardayda dhigata SATEC waxaa la siiyaa barnaamij cusub oo isku dhafan tacliinta adag iyo codsiyada qoto dheer ee tikniyoolajiyadda, computer, iyo daraasaadka deegaanka.
Intaa waxaa dheer, SATEC oo ah akadeemiyada gobolka ee 'CISCO' waxay abaalmarin ku bixisaa shahaadada CISCO Networking iyo A + Shahaadada Adeegga Kumbuyuutarka Adeegga ee barnaamijka weyn. Tani waxay horseeday in SATEC dhowr jeer loogu magac daro dugsiga sare ee ugu wanaagsan teknolojiyadda magaalada Toronto.
SATEC waxay kaloo bixisaa laba barnaamij oo ku takhasusay Xirfadaha Sare (SHSM) oo ay ku jiraan ICT (Teknolojiyada Macluumaadka iyo Isgaarsiinta) iyo Deegaanka. Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadani wuxuu uga baahan yahay ardayda inay dhammaystiraan tiro cayiman oo koorsooyin ah iyo koorso laba-wadaag ah. Marka ay ku guuleystaan ​​dhameystirka, ardayda waxaa la siiyaa shahaadada heerka warshadaha.
Akadamiyadda RH King (RH Boqorka, RHKA or King) waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan Kanada iyo dugsi kale oo rasmi ah oo ku yaal Scarborough, Toronto oo la aasaasay 1922.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah dugsiyada sare ee ugu wanaagsan Scarborough, Canada, RH King waxay ka socotaa Fasallada 9aad ilaa 12aad. Ardayda dhigata RHKA waxaa la siiyaa xorriyadda ay uga qayb qaadan karaan farshaxanka muuqaalka ah, qoob ka ciyaarka, sawir qaadista, maaraynta farshaxanka, isgaarsiinta, teknolojiyadda, riwaayadaha, moodada, warbaahinta, improv, muusikada (codka, kooxda, xadhkaha, gitaarka), tiyaatarka muusikada, xirfadaha soo bandhigida, soosaarka tiyaatarka farsamada, farsamada farsamada, iyo soosaarka fiidiyowga.
Iskuulku wuxuu kaloo ardayda siiyaa barnaamij hoggaamineed. Barnaamijkan Hoggaamintu waa durdurro farshaxan iyo dhaqan u baahan afar (4) sano in la dhammaystiro.
Howlaha dugsiga ee ka baxsan, ardayda waxay kaqeybqaataan kubbadda laliska, kubbadda koleyga, xeegada, kubbadda calanka, cricket, xeegada ciyaarta, curling, lacrosse, golf, iskutallaabta, rugby, kubbadda cagta, dabaasha, frisbeeyaha ugu dambeeya, gaagaaban, badminton, iyo track & berrinka
Sir John A. Macdonald Collegiate (Sir John A. Macdonald CI, SJAMCI, Sir John A. Macdonald or Mac) waa mid ka mid ah dugsiga sare ee ugu sarreeya dadweynaha ee ku yaal Scarborough, Toronto, Ontario oo la aasaasay 1964.
Dugsigu wuxuu ardayda u fidiyaa barnaamijyo tacliimeed oo ka socda Fasallada 9aad ilaa 12aad.
Sir John A. Macdonald wuxuu leeyahay naadiyo dhowr ah oo loogu talagalay sayniska, xisaabta, iyo kumbuyuutarka. Naadiyadan dhexdooda, ardayda waxay kaqeyb galaan tartamada sida Jaamacadda Waterloo ee xisaabta (Pascal, Cayley, Fermat, iyo Euclid), kiimikada (Avogadro iyo Chem 13), iyo fiisigiska (Sir Isaac Newton) imtixaannada, iyo sidoo kale imtixaanka injineernimada ee Jaamacadda Toronto. (DaVinci Engineering Competition), iyo dhowr imtixaan oo Mareykan ah.
SJAMCI sidoo kale waxay leedahay naadi muusig oo cajiib ah oo ardayda siineysa fursad ay ku soo bandhigaan kooxda Jazz band, Concert Band, Wind Ensemble, Strings, iyo Choir. Iyada oo loo marayo naadiga muusikada, ardayda Sir John A. Macdonald waxay ku tartamaan tartamada muusikada ee heer gobol, gobol, iyo caalami.
Dugsiga Beddelka Sare ee Delphi waa dugsi sare oo dadweyne oo ku yaal Scarborough, Toronto, Ontario, Canada.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah dugsiyada sare ee ugu wanaagsan Scarborough Canada, iskuulku wuxuu ardayda u siiyaa barnaamij tacliimeed adag. Ardayda Fasalada 9aad iyo 10aad waxaa la siiyaa koorsooyin tacliimeed halka Fasalada 11 iyo 12 ardayda la siiyo jaamacado iyo koorsooyin isku dhafan.
Delphi waxay u oggolaaneysaa ardaydeeda inay ku lug yeeshaan horumarinta hoggaaminta iyo howlaha kale ee manhajka ka baxsan.
Machadka Kuliyadda ee West Hill (West Hill CI, WHCI or West Hill) waa dugsi sare oo dowladeed oo ku yaal Scarborough oo la aasaasay 1955.
Ardayda dhigata West Hill CI waxaa lagu maamulaa fursado meelayn sare ah oo ah Xisaabta, Ingiriiska, Kimistariga, Bayoolajiga, iyo Fiisigiska kuwaas oo u diyaarinaya jaamacad ama waxbarasho jaamacadeed. Naadiga Fiisigiska ee dugsigu wuxuu sanad walba ku tartamaa Jaamacada McMaster ee sayniska.
Waaxda Riwaayadaha ee West Hill waxay ku qabataa Bandhig Faneedka Ontario Sears.
Maaddaama uu yahay mid ka mid ah dugsiyada sare ee ugu wanaagsan Scarborough Canada, iskuulku wuxuu muujinayaa dhaqanka iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay iyada oo loo marayo naadiyadiisa dhaqanka oo ay ka mid yihiin Desi Club, Afro-Canadian Association, Ururka Ardayda Muslimiinta, Ururka Ardayda Bengali, iyo West Indian Club.
Machadka Collegiate Birchmount Park (Birchmount Park CI, BPCI, ama Beerta Birchmount) waa dugsi sare oo dadweyne oo ku yaal Scarborough oo la aasaasay 1964 wuxuuna hadda ka mid yahay kuwa ugu fiican gobolka.
Iskuulku wuxuu bixiyaa koorsooyin dhowr ah oo ka kooban tababar shaqo, goob shaqo, kulleejo, ama waxbarasho jaamacadeed.
Ardayda waxaa la siiyaa koorsooyin fasallo casri ah oo marin u leh WiFi. Fasal kasta waxaa ku yaal dhowr laptop iyo SMART Boards oo gacan ka geysta sidii waxbarashada looga dhigi lahaa mid deg deg badan oo fudud.
Neil McNeil Catholic High School waa dhamaan-wiilasha dugsiga sare ee Roman Catholic ee ku yaal Scarborough oo la aasaasay 1958 loona tixgeliyey inuu yahay dugsiga sare ee Katooliga ugu fiican ee Scarborough.
Iskuulku wuxuu ujeedkiisu yahay inuu saameyn ku yeesho nolosha ragga dhalinyarada ah iyada oo loo marayo barnaamijkiisa waxbarashada diinta, wadaadnimada, dacwadaha dugsiga, iyo dib u gurashada.
Ardayda dhigata Neil waxay ku koraan iimaan iyo qiyam masiixi ah barnaamijyada tacliinta ee dugsiga iyo waxqabadyada manhajka ka baxsan.
Neil McNeil wuxuu kaloo ardayda siiyaa barnaamij la-talin ah oo ay la yeeshaan Jaamacadda Toronto iyo barnaamij iskaashi waxbarasho oo siiya khibrado shaqo oo shaqsiyeed.
Dugsiga Sare ee Maplewood (Maplewood HS, MHS, ama baanyada) waa dugsi gaar ah oo xirfadeed dadweyne oo takhasus gaar ah leh oo laga aasaasay 1967 magaalada Scarborough.
Maplewood HS waxay ka mid tahay dugsiyada sare ee ugu fiican Scarborough Canada, Maplewood waxay ka bilaabantaa Fasalada 9 ilaa 12.
Koorsooyinka barnaamijkan waxbarasho waxaa ka mid ah Ingiriisiga, Xisaabta, Taariikhda, Juqraafiga, Sayniska, iyo manhajka sharciga.
Tan ka sokow, ardayda dhigata Maplewood waxaa la siiyaa barnaamijyo farsamo iyo farsamo sida Cosmetology, Ganacsiga iyo Daraasaadka Kombuyuutarka, Dhaqaalaha Guryaha, Waalidnimada, Tolitaanka, Teknolojiyada Isku-dhafan, Dhismaha, Gaadiidka, Xirfada, Dayactirka, Isgaarsiinta Tech, iyo Woodworking.
Dugsiga Sare ee Excel waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaal Scarborough, Toronto, Canada.
Iskuulku wuxuu soconayaa Fasalada 4 ilaa 12 Dugsiga Sare ee Excel, ardayda waxaa lasiiyaa barnaamijyo tacliimeed fasalada iyo internetka. Barnaamijyada tacliinta waxaa la siiyaa waqti-buuxa, waqti-dhiman, iyo xirfadlayaal shaqeynaya si ay ugu suurtagasho inay waxbartaan inta ay shaqeynayaan.
Iskuulku wuxuu bixiyaa koorsooyin onlayn ah oo ay ka mid yihiin MCV4U (Fasalka 12, Xisaabinta iyo Vector), MDM4U (Fasalka 12 Xisaabta Maaraynta Macluumaadka), SPH4U (Fasalka 12 Fisigiska), SPH3U (Fasalka 11 Fisigiska), MCR3U (Fasallada 11 Shaqooyinka iyo Codsiyada), MHF4U (Fasalada 12 ee Shaqada Sare), SCH3U (Fasalka 11 Chemistry), SCH4U (Fasalka 12 Chemistry), ENG4U (Fasalka 12 Ingiriis), ENG3U (Fasalka 11 Ingiriisiga), SBI130 (Biology), SBI4U (Biology).
Dhanka kale, barashada khadka tooska ah waxaa lagu qaadaa fadhiyada Zoom oo dhammaan walxaha daraasadda waxaa loogu diraa ardayda emayl ahaan.
Dugsiga Sare ee Wales College waa dugsi sare oo ku yaal Scarborough, Toronto, Canada oo loo arko inuu yahay midka ugu fiican gobolka.
Iskuulku wuxuu soconayaa Fasalada 7aad ilaa 12aad. Ardayda dhigata fasalada 11aad iyo 12aad waxaa lasiiyaa koorsooyin jaamacadeed ama jaamacadeed. Natiijada dhowrka semester ee dugsiga sanad dugsiyeed kasta, ardaydu waxay dalban karaan inay waxbartaan wakhti kasta oo sanadka ka mid ah.
Dugsiga Sare ee Wales College wuxuu u adeegaa xarun imtixaan SAT iyo xarunta imtixaanka IELTS tanina waxay u suurta gelineysaa ardaydeeda inay galaan jaamacadaha ugu wanaagsan Kanada iyo Mareykanka.
Marka ay si guul leh u dhammaystiraan koorsooyinka, ardayda waxaa la siiyaa Dibloomada Dugsiga Sare ee Ontario (OSSD).
Liiska xulashada, dugsiyada sare ee ugu fiican Scarborough Canada ee ardayda u diyaarinaya waxbarashada kuleejka waxaa ka mid ah:
Waxbarashada dugsiga sare ee Scarborough waxay u diyaarisaa ardayda waxbarashada kuleejka Kanada ama meel kasta oo adduunka ah. Si buuxda uma diyaarin kartid kuleejka haddii aadan helin waxbarasho sare oo sare.
Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu taxay dugsiyada sare ee ugu wanaagsan Scarborough Canada oo bixiya waxbarasho tayo sare leh.
Top 10 Kulliyadaha Bulshada ee ugu Fiican Kanada
Dugsiyada Hoose ee ugu Fiican Magaalada Toronto Ardayda Caalamiga ah
Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee ugu Fiican Kanada
Dugsiyada Sare ee ugu Fiican Magaalada Toronto Ardayda Caalamiga ah
Deeqda waxbarasho ee ugu Fiican ee Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
Deeqaha Canadianka Barashada Hagaha Dibadda
Previous Post:15 Koorsooyinka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Nigeria ee Ardayda
Post Next:13 Barnaamijyada Sare ee Qalin-jabinta injineernimada Jineerka
AssignmentHelpPro.co.uk: Get Best Online Caawinta Meelaynta UK At 50% Off!